Comcast को ब्ल्याकलिस्टबाट हटाउँदै Martech Zone
यदि तपाईं ईमेल मार्केटिंग मार्फत तपाईंको अनुप्रयोगबाट धेरै ईमेल पठाउँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले यो सुनिश्चित गर्नु आवश्यक छ कि तपाईं साइट ईन्टरनेट सेवा प्रदायकको साथ श्वेतसूचीमा हुनुहुन्छ। मैले यसका साथ व्हाइटलिस्टि .को बारेमा पहिले लेखेको छु AOL र याहू! आज हामीले पत्ता लगायौं कि त्यहाँ एक मुद्दा हुन सक्छ जहाँ हाम्रो साइट द्वारा ब्लक गरिएको हुन सक्छ Comcast। Comcast छ केहि जानकारी उनीहरूले तपाईंको ईमेल रोकिरहेका छन् वा छैन.
मैले विगतमा लेखेको छु के कदम? मैले यो सुनिश्चित गर्न सिकेको छु कि हाम्रो साइटले राम्रो प्रतिष्ठा कायम राख्छ, तर यो सम्भव छ ईमेल उद्धारको मुद्दाहरू तपाईं निर्दोष हुनुहुन्छ भने पनि.
कमकास्टका एक प्रतिनिधिले मलाई लि link्कको साथ ईमेल छोडे Comcast को ब्लक गरिएको प्रदायक अनुरोध फारम। मैले यो सबै भरिदिएँ, आशा छ, यसले मुद्दाहरूको समाधान गर्दछ जुन हामी गत रातमा चलायौं जहाँ एक प्रयोगकर्ता वास्तवमै हाम्रो अनुप्रयोगमा पहुँच गर्न असमर्थ थियो।
मैले कम्कास्टको डीएनएस ब्लक गर्ने बारेमा धेरै केहि दुःस्वप्नहरू पढेको छु। हामी प्रयोगकर्ताहरूलाई उपयोग सिफारिस गरिरहेका छौं OpenDNS बीचमा
टैग: कालो सूचीcomcastईमेलईमेल कालोसूची
Easy सजिलो तरीका तपाईको साइटको पठनीयतालाई सुधार गर्न